O nwere ikeịbụnaanịihedịgịmkpa ijimụbaaokporoụzọ、mee ka njirimaragịpụtaìhè、naịkwọụgbọala。 Ịtọpụtaụlọahịadịn’ịntanetịbụnanịmmalite。 Nzọụkwụọzọna-arịwanyeelu naịzụliteahịa。 Ịdeblọgụmgbe niilebụotu n’imeụzọkachasịmma isi mee kabọlna-agagharị.
Dịnnọọkaanyịnọn’otu peejiahụ、ebe abụọfọdụn’ime urudịokentanetị：
Okporoụzọ：Nkembụ、blogdịka Magnet na ebenrụọrụweebụgị。 Ogeọbụlaịbiputere blogọhụrụ、ana-adọtandịahịaazụnasaịtịgịijigụọya。 Site n’ebeahụ、ọbụnanịoberengwepụnanzọụkwụna peeji nkengwaahịagị。 Ịdebeblọọgụmgbe niile na-eme ka okporoụzọna-agbanye、nkebụisi ihe na-eme kaịgbanweeahịa.
Njikọnjikọta：Nkeabụọ、ogeọbụlaonyeahịana-agụbloggị、ha na-eche naejikọrọha na akaragị。ハ・ナ・アマタク・バニエレ・ガ・マ・ナ・エト・エト・イジ・トクワサ・ゴ・ビ。 Ọnụọgụgụna-egosi nakarịa95％nkendịahịaadịghịnjikereịzụtan’akagịozugbo。 Ya mere、zụliteha nkeọmaruo mgbe hadịnjikereịzụta.
ハナエドゥガ：オゲọbụlammadụna-ekereòkègị、ebenrụọrụweebụgịna-abatandịahịaọhụrụ。 Ọna-emepụtaọhụrụnaịnwere ike ijinwayọọnwayọọgbanwee kaịna-akwụndịahịaụgwọ。 Ọbụahịaefu na mfe.
Nyocha njirimara search：Googlehụrụebenrụọrụweebụna-emelite mgbe niile。ハ・ナ・アフクワ・ブロイ・バラ・ウル・ドーミミ。オンラインna-echekwa na biputereblọọgụmgbe niile a na-ahọrọelukarịandịna-enweghị。 Otuブログna-enyekwagịohere ijiọtụtụisiokwundịna-enyere Google別名ịghọtana categorizeazụmahịagị。 Site naịdeblọgụ、ịga-enwekwa ikeịnyenjikọtana ebenrụọrụweebụgị、nke Google na-ejitụọikikegị。 Mgbeụlọahịagịn’ịntanetịdịelu、ịga-enwetakwu okporoụzọ、naọtụtụahịa.
Ya mere、any、niile kwetara、ịdeblọgụdịoke mma makaazụmahịaazụmahịagị。 Nanịakụkụdịegwubụịchọpụtaiheịga-ede banyereブログ。 Nnukwuatụmatụnwere ike inyeregịaka、m kwenyere na ya ike nkeịhaziọdịnayagị。 Enweela m ihe ole na ole iji malite.
5 5. Kachaọhụrụoruニュース
ブログbụnnukwu ikpo okwu iji gwagịakụkọ。 Ịhapụndịahịan’imeụwagịna-ewulintụkwasịobi Ọna-eme kammekọrịtadịmma、na-enye aka mee kammekọrịtadịn’etitigịnandịahịagị.
Jiriブログgịkọwaaraihe mere i ji maliteụlọọrụ、na ihe merengwaahịandịahụjidịgịezigbo mkpa。 Buru uzo、n’eziokwu、na imeghe、ndịahịagịga-atụkwasịkwugịobi.
Ịnwekwara ike iji blog kandịahịamara ihe na-agan’azụMpaghara。 Gwa ha iheịna-aga、makọọha na mgbasa ozina-abịa。 N’okpuru ebe a、lelee Helm（ụlọakpụkpọụkwụakpụkpọanụ）na-eme kandịna-agụya ruo oge ha nantanetị.
Jiriブログgịiji gosindịahịaiheọmụmagbasarangwaahịagị。 nnre iheịna-agwandịmmadụna ibegịでした。 Otúọdị、site na iji blog、ịnwere ike inwetankọwazuru ezukarị。 Ịnwere ike igosindịahịaotúe si eji ya、otu esi eme ya、na iheọbụlaọzọdịmma.
Ọna-enyere ha akaịmatakwubanyerengwaahịaahụ、na-eme ka ha nwee ikeịzụtaya.
Dịka iheatụ、igwe na-ejinwayọọnwayọọ、bụụlọọrụnkena-emepụtanche na ighikota（ọdịotu aka）。ハナエジブログハクワアオトゥハシミーハドイチェ。 Ọna-enyendịahịaakaịghọtakwuụdịazụmahịagị、na-eme ka ha nwee ikeịzụtangwaahịagị.
ブログbụebedịmma igosigịọkachamara。 Ọbụrụnaịnwere ike inye amamihe maọbụkụziereonyeahịaotúga-esi eme ihe、ozugboịmaliteremmekọrịta。 Ịgosipụtaranaịbụọkachamaran’ọhịagị、nke na-agbandịahịaumeịtụkwasịgịobi.
Dịka iheatụ、Maybelline na-erengwaahịaetemeete。 Ha blogジュプタラナンドụマụバラウルマナエシナヤ。 Rịbaamaotúha si ejiblọọgụnkuzindịa iji gosingwaahịaha。ウボロボロ阿波なえぶけえぶけ!
ブログgịbụụzọdịmfe madịmfe ijikpọsaangwaahịaọhụrụmaọbụmee ememedịịrịbaama。 Ihe omuma a di n ‘ozo na egosiputa ulo oru sneaker’ Ejuputa ahihia ‘n’ikwuọkwaohuru。 Ọbụụzọdịmfe iji gosindịahịaịna-etolite、na-echekwa ha.
Ịnwere ike iji bloggịnaụlọọrụgị。 Ịkusannukwu oziọmabanyereụlọọrụgịna-egosi naịbụnke oge na-egosi naịnọn’ụwa。 Ọbụụzọdịmfe iji gosiọkachamaragị、ma na-eburuakụkọọkụọkụn’obi.
Akụkọakụkọdịkanke ana-achụpụọtụtụokporoụzọ、karịsịasite nandịna-egentịnkeọma-ndịna-esoụlọọrụahụnkeọma.
Dịkaọmụmaatụ、dịka iheatụ、ereahịangwáọrụsọọfụ。 Ha na-enweghi ikeịkwọụdaokporoụzọsite naịkọakụkọbanyereasọmpiasọmpinaakụkọụlọọrụ：
Anyịna-amaliteịhụblọọgụblọọgụna isiokwu。 Ntak-a？ Maka otu Google nweregosipụtarammasịmaka ogologo、na-agụihe omimi、ma mee ka hadịelu。 Maọbwakwa n’ihi naọna-eme kandịmmadụnasaịtịgịdịogologo ma na-enyekwu ozi。 Otuụzọisi mee nkeahụbụogologo oge ‘iche echiche’ maọbụikwu okwu naụlọọrụahụ.
Kaanyịkwuo naịnwereụlọahịaejijiahịa、dịkaọmụmaatụ。 Ịnwere ike iji bloggịịzaajụjụbanyereọnọdụndịna-adịbeghịanya。 Ịnwere ikeịkatọụlọọrụejiji maọbụkwadooụfọdụn’ime nsogbuahụ（iheọbụlasin’ụdịiji aji）。 Ndịa na-eche naịna-ejikarịbọmbụkarịagị.
Ihe kacha mma banyereịdeblọgụbụenweghịiwu！ Nwee echiche na ichen’èzíigbe。 Ịnwere ikeịdeblog banyere iheọbụlanwerenjikọụfọdụnangwaahịagịnaụlọọrụgị。 Ọbụrụnaịna-ere nri職人、ブログbanyerentụziakaịhụrụn’anya。 Echela na enweregịike ijiụfọdụusoro maọbụntụziaka。 Jiriブログgịiji gosi onwegị.
Nri niile na-eji ebenrụọrụweebụha erengwaahịanri。 Otúọdị、ha na-ejikwa ya kesaa nkuzi ihe okike。 Chọtaisiokwu makangwaahịagị、ma soro ya.
Ụlọọrụọbụlanwere kalendapụrụiche nke ihe omume。 Clọọrụọgbaraọhụrụnwere TechCrunch。 Ụlọọrụndịna-atọọchịnwere Comic-Con。 Ụlọọrụegwúnwere Coachella na SXSW。 ụlọọrụegwuregwundịdịegwu nwere X-Games。 Ọbụrụnaịna-erengwaahịanaọrụndịa、gbalịaịgaihendịa。 Deen’azụihe njirimara nke na-etinyendịahịagị。 Ọna-egosi ha naịnọn’obiụlọọrụgị。 Ọzọ、ọna-eme maka kediegwuọdịnaya!
Lelee otu otuụlọahịaejiji eji Paris Fashion Week tinye iheọhụrụn’ime blog.
Dịkaịpụrụịhụ、enwerewetụtụechiche okike n’ebeahụkaịmaliteịdeblọgụ。 Jiriaghụghọndịa、ọdịghịkwamgbeịga-enwe nsogbu site na onye dere edemedeọzọ！ Kaọdịugbu a、ịga-ahụokporoụzọnaahịagịna-amaliteịmaliteelu.
블로그 bloglọ ahịa gị n’ịntanetị ọ nwere 블로그? ikepa i naanụ ihe dị gụ